Kulamada Durres – Via Hotels
Hoteellada ku yaal Tirana
Hoteellada ku yaal Durres
Hoteellada ku yaal Saranda
Dhacdooyinka & Kulamada
Kulamo ka dhacay Saranda
Waxyaalaha ku yaal Tirana
Waxyaalaha lagu bixiyo Durres
Waxaan leenahay goobo loogu talagalay dhammaan dhacdooyinkaaga!
Ku raaxayso soo dhawayn diiran oo lagu soo dhaweeyo huteelada ugu saxsan ee Albania, goobaha nasashada, filooyinka iyo aparthotels
Goobaha Shirarka ee Durres
Haddii aad rabto inaad ku qabato shirkaaga ama kulanka Albania Durres, markaa waxaad samaysay doorasho qumman. Taariikhda Durres qabow waxay soo jiitameysaa 406 sano, halkaas oo dhaqanka iyo dhaqanka casriga ah ay isku daraan hab lagu farxo. Magaaladu waxay u dhawdahay jardiinooyin qurux badan iyadoo waliba ku raaxaysanaysa bartamaha magaalada.
Goobaha shirarka iyo qolalka shirarka ee DURRES
Dabiici ahaan, waxaanu ku leenahay Durres meelo badan oo ah tas-hiilaadka shirarka iyo qolalka shirarka kuwaas oo kuu fududaynaya inaad la kulanto. Waxaan bixinaa shirar iyo shirar nooc walba leh haddii aad ka fekereyso waxqabadyada koox-dhisidda, bilawga ama dhacdo shirkadeed. Waxaanu kaa caawinaynaa inaad hesho xarun shir si aad shirkaaga uga dhigto mid guulaysata.
Hoteelada shirarka ee Durres
Hoteel & makhaayad
VH Belmondo Hotel waa doorashada ugu fiican ee ganacsigaaga iyo safarkaaga raaxada ee Albania mahadsanid goobtayada wanaagsan ee u dhow xeebta. Iyada oo leh qaab casri ah oo yar, Western Star Hotel wuxuu leeyahay 30 qolal waasac ah oo si gaar ah loogu talagalay raaxada martidayada. Dhammaantood waxay ka kooban yihiin Wi-Fi-xawaaraha sarreeya, qaboojiyaha gaarka ah iyo musqulaha gaarka ah.
VH PRIME Villa Pascucci waa doorashada ugu fiican ee ganacsigaaga iyo safarkaaga raaxada ee Albania iyada oo ay ugu wacan tahay goobtayada fiican ee u dhow xeebta. Iyada oo leh qaab casri ah oo yar, PRIME Villa Pascucci waxay leedahay 50 qolal waasac ah oo si gaar ah loogu talagalay raaxada martidayada. Dhammaantood waxay ka kooban yihiin Wi-Fi xawaare sare leh, qaboojiye shaqsi iyo musqulo gaar ah.
VH Western Star Hotel waa doorashada ugu fiican ee ganacsigaaga iyo safarkaaga raaxada ee Albania iyada oo ay ugu wacan tahay goobtayada fiican ee u dhow xeebta. Iyada oo leh qaab casri ah oo yar, Western Star Hotel waxa uu leeyahay 30 qol oo waasac ah oo si gaar ah loogu talagalay raaxada martidayada. Dhammaantood waxay ka kooban yihiin Wi-Fi xawaare sare leh, qaboojiye shaqsi iyo musqulo gaar ah.
Isdiiwaangeli Waxyaabo Gaar ah oo nagaga yimid
Heerarka iyo Shuruudaha
Ku Soo Biir Kooxdayada
Via Hotels © 2020. Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin.